Maaskaro Ski | Muraayadaha indhaha ee isweydaarsiga - ULLER
Si loo jimicsado waxqabad kasta ama isboorti buuro waan ognahay inaan marwalba u qalabeyno sida ugu macquulsan. Dadka jecel xiisaha iyo isboortiga xad dhaafka ah tani waa wax mudnaan la siinayo waqti kasta, maaddaama munaasabado badan aan ku heli karno xaalado badan oo la jeclaan karo oo halkaas yaal, waana lagama maarmaan in loo diyaar garoobo munaasabad kasta ama dhibaato kasta oo timaadda.
Mid ka mid ah dhinacyada ay tahay inaan mudnaanta siinno waqti kasta, waana taas waxa ay khubaradu sameeyaan, waa ilaalinta aragga ee ku celcelinta cayaaraha xilliga qaboobaha maaskaro barafka. Uller® tan waa arin aan marwalba tixgalineyno, maadaama shucaaca ultraviolet uu siddeed jibaar ka xoog badnaan karo buuraha dushooda iyo buuraha, marka waa inaan iska ilaalinaa indhaheena inaan ilaalino waqti kasta si aan uga fogaanno dhibaatooyin halis ah ama cuduro muddo dheer soo gaadha awgeed.
Waana in joogga mararka qaarkood uu cadaw u noqon karo indhaha haddii aanan qaadin tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah si aan ugu ilaalinno si ku filan, maadaama aan u baahanahay aragti wanaagsan mar walba oo ku aaddan tababarka isboortiga, oo ah arrin ka gudub ah kooxdeena xorriyadda iyo cayaaraha xirfadleyda ah .
Sababtaas awgeed ayaan Uller® ugu haysannaa tikniyoolajiyadda ugu casrisan indhaha adduunka maaskaro barafka. Iyada oo la adeegsanayo muraayadaha indhaha ee 'Tech Performance Optics' X-POLAR waxaan ku guuleysaneynaa qeexitaan iyo caddeyn ka sarreysa heerka caadiga ah taas oo noo oggolaaneysa farqiga iyo midabka cajiibka ah.
Tan waxaa gacanta koowaad ku sheegaya qof aad ugu qaas ah kooxda Uller®, sawir qaadaha jecel buuraha iyo dhamaan isboortiga lagu dhex dhaqmi karo, Chechu Arribas. Jacaylka saamiga dabeecadda bixiya, Chechu wuxuu bilaabay hal-abuurka siddeed sano ka hor isagoo isku dayaya inuu u gudbiyo waxa uu ku dareemay dhaqamadan iyada oo ay ugu wacan tahay sawir qaadista.
Isaga, in kasta oo xaqiiqda ah in qaadashada 23 kiilo oo qalab ah dusha sare ay durbaba tahay hawl culus, xaaladaha barafka ayaa ah wax ay tahay inay ka ciyaaraan wanaagiisa, sidaas darteed wuxuu sidoo kale ogyahay gacanta koowaad in cimiladu tahay wax la tixgelinayo. markii buurta la samaynayo oo la dooranayo maaskaro barafka taas ayaa kula socon doonta markasta.
Wixii Chechu Arribas ah waji baraf Waa shey lagu hagaajiyay qalabkiisa muhiimka ah markii la samaynayo dhammaan noocyada dhaqanka ee buuraha. Isaga, oo isku tixgeliya inuu aad ufiican yahay markay tahay doorashada waxyaabaha loo adeegsan doono, waxaa lagama maarmaan ah in indhashareerkiisa barafka uusan qiijin oo ay ka ilaaliyaan qorraxda, iyagoo u siinaya muuqaal uu u baahan yahay maalmahaas. gargaar hooseeya iyo aragti liidata.
Waa sababtaas tan keentay in muraayadaha laysku beddeli karo ee Chechu Arribas "waa raaxo." Ururinta cusub ee moodooyinka maaskarada barafka ee Uller® waxaa ka mid ah nidaamka isweydaarsiga muraayadaha indhaha ee magnet-ka kaas oo kuu oggolaanaya inaad si fudud oo dhaqso ah u beddesho muraayadaha indhaha xilli kasta, iyadoo ku xiran xaaladaha cimilada.
Tan iyo markii uu sawir qaadaha jecelyahay isboortiga buuraha Chechu Arribas uu bilaabay inuu qaado sawir noocan ah, wuxuu cadeeyay inay adkaan doonto in la shaqeeyo si loo helo qalab tayo leh waqtigaas.
Wuxuu naftiisa noo sheegayaa: Waxaan ku qabtay kalfadhiyo 15 ka hooseeya eber, kalfadhiyo leh dabaylo ilaa 100 km / h, waxaan qabtay fadhiyo bood bood ah oo ka laadlaada 500 mitir oo dhulka ah, waxaan inbadan ka shaqeeyay sawirada samatabbixinta meelaha aan iftiinku ka jirin halka taa bedelkeedana ay jirto dhoobo badan, xarig go'an si loo helo boosaska toogashada… "Shaki la'aan, dhabbi la xiriir isboorti iyo ficil oo sawiradiisu marwalba noo soo gudbiyaan.
Xaaladaha cimilada ee xun ayaa ka mid ah waxyaabaha sida weyn u welwela dadka ka tirsan kooxda Uller®, sida Chechu Arribas. Sababtaas awgeed, ula jaan qaado iyaga oo uga mahadcelinaya muraayadaha indhaha ee ka kooban kuwaaga maaskaro barafkawaa muhiimadda ugu weyn waana qayb aad muhiim ugu ah nolol maalmeedka dadka waqti badan ku qaata buuraha.
Sababtaas awgeed, wajiyadeenna barafka waxay ku xirtaan muraayadaha indhaha muraayada, waa mid aad u fudud, awood u leh inuu ku beddelo muraayadaha indhaha kaliya 2 ilbidhiqsi. Labada muraayadaha indhaha waxaa ka mid ahaa: 1 maalmaha qoraxdu ku jirto ee CAT.3 iyo mid cad oo maalmo ah aragti hoose oo ku jirta CAT.1. Isla mar ahaantaana, dhammaan miirayaashayaga waxaa loo oggolaaday inay iska ilaaliyaan shucaaca ultraviolet, oo leh muraayadaha indhaha ee ku habboon ilaalinta indhaheenna.
Dadka sida Chechu Arribas, oo ay weheliyaan kuwa xamaasadeena ah iyo kooxda ciyaartooyda xirfadleyda ah, xaaladaha cimiladu waa wax ay tahay inay tixgeliyaan laakiin ma ahan inay shuruud ku xirnaadaan ama la joojiyo gabi ahaanba markay fulinayaan howlahooda. Fududeynta muraayadaha laysku beddeli karo waxaa loola jeedaa in si fudud loola jaanqaadi karo xaaladaha maalinta buurta ay ku siin karto: qabow, kuleyl, dabaysha, qorraxda, roobka ... Muhiimaddu waa raaxada iyo sahlanaanta sida loola jaanqaadi karo loolana jaan qaadi karo xaalad kasta iyadoon leeyihiin dhowr maaskaro barafka gacantaada.
Isla mar ahaantaana, mahadsanidnimada noo maaskaro barafka, Waxaan dooneynaa inaan u fidino wadayaasheena waxqabad aad u sareeya labadaba maalmaha qoraxdu jirto iyo maalmaha xaaladaha cimilada xun, ha ahaadaan ceeryaamo, baraf, roob ... Intaa waxaa dheer, muraayadaha indhaha ee loo yaqaan 'X-POLAR lenses' waxay leeyihiin laba lakab oo ah AntiFog laba lakab si looga fogaado Ilaalinta UV-400. Taasi waa sababta loo tixgeliyaa muraayadaha indhaha ee ugu horumarsan suuqa!
Uller® Waa summad qiimo sare leh oo tayo sare leh oo ay soo bandhigeen oo loogu talagalay ciyaartoy caan ah. Dhammaan alaabooyinkeenna waxaa lagu abuuray khibrad ay leeyihiin ciyaartoy waxqabad sare leh oo uur yeelanaya baahidooda alaabooyinkeenna kuwanna waxaa loo abuuray inay buuxiyaan dhammaan shuruudaha. Alaabooyinka waxaa lagu tijaabiyaa heerka ugu sarreeya ee walbahaarka suurtagalka ah si loo hubiyo inay la kulmaan waxyaabaha laga filayo inta lagu gudajiro adeegsiga xirfadda iyo hiwaayadda hiwaayadda, sidaa darteed waxaan dooneynaa inaan kugu dhiirrigelino inaad iskudaydo muraayadaha indhahayaga ah ee isweydaarsan kara!
Haddii aad xirfadle tahay, hiwaayad, ama sida Chechu Arribas, aad ugu jeceshahay sawir qaadista waxqabadka, indhahaagu had iyo jeer waa inay noqdaan kuwa mudnaanta leh markii la ilaalinayo dhammaan noocyada xaaladaha. Maxaad sugeysaa Fiiri dhammaan astaamaheeda!#FreeRidersAtHearth
Miyaad horeyba u ogayd aruurintayada cusub ee maaskaro barafka "Derbiga"? Ha moogaan! Uller® waligeed kama fogaan dharka isboortiga. Kooxdayada nashqadeeyayaasha iyo taageerayaasha freeride, the